Mpempe La Rochelle - Dele De Ré LFBH FSX & FSX Steam - Rikoooo
La Rochelle - Dele De Ré LFBH FSX & FSX Steam
downloads 30 183
Alexandre REMY FAF010
Mara mma photoreal mma version 3.0 nke ọdụ ụgbọ of La Rochelle na France (LFBH) Na gburugburu ya. -Agụnye ya àkwà ile de nd o, nke ogologo ya 2926.5 mita. The ụlọ e mere n'okpuru GMAX kachasị-eme ka ebe ndị mara mma dị ka were were dị ka o kwere. Nnọọ ntị nke fps e mere! N'ala mkpara ihe esere, otú ị ga-adịghị anya ịhụ ka ndị mmadụ na-eje ije tarmac. N'ọdụ ụgbọ na-ọma mepụtagharị.
La Rochelle Airport bụ ụgbọelu na-emeghe ka ọha na eze ikuku okporo ụzọ (okpu), emi odude 2.5 km n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke La Rochelle, Charente-Maritime. A na-eji maka ikuku iga (mba na mba) na omume nke ntụrụndụ na njem (n'ozuzu ụgbọelu)
Iji banye ebe ahụ mepee njikwa ọdụ ụgbọ elu FSX/P3D ma tinye koodu a LFBH na ubi ọdụ ID
Onye edemede: Alexandre REMY FAF010
Gran Canaria Intl Sim-Refeyim FSX & P3D
Ọdụ ụgbọ elu Quebec Jean Lesage FSX & P3D 3.0
KLAX - Photoreal Airport nke Los Angeles FSX & P3D 3.0
Foreleza City + Photoreal Airport FSX & P3D